Dowladda oo ka hortimid in shirka lagu qabto Magaalada Muqdisho | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dowladda oo ka hortimid in shirka lagu qabto Magaalada Muqdisho
Dowladda oo ka hortimid in shirka lagu qabto Magaalada Muqdisho
Wasiirka Warfaafinta Somaliya, Cismaan Abokar Dubbe ayaa ka jawaabay baaqyadii Puntland, Jubbaland iyo Gudoomiyaha Golaha Aqalka Sare, Cabdi Xaashi Cabdullaahi ee ahaa in shirka uu ku baaqay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu qabto Caasimadda Muqdisho, isla-markaana ay ka qaybgalaan dhammaanba dhinacyada siyaasadda.
Wasiirka ayaa marka hore sheegay in baaqa Madaxweynaha uu daaran yahay in la sii amba-qaado wadahadalada xalka loogu raadinayo arrimaha doorashooyinka ee dalka.
“Baaqan uu Madaxweynuhu soo saaray xalay waxa uu tusaale u yahay, oo uu daaran yahay in lagu sii amba-qaado, sidii dalkan ay doorasho uga dhici laheyd 2021, sida ugu dhaqsaha badan, laguna dhameystiro heshiisyadii 17-kii September.” Ayuu yiri Wasiirka oo caawa la hadlay BBC Somalitv.
Wasiirka ayaa tilmaamay baaqyada ku aadan in shirka lagu qabto Caasimadda Muqdisho ay yihiin wax aanay horey u fileynin, isla-markaana aan loo baahneyn in shirka lagu qabto magaalo aan Garoowe ahayn.
“Waxaa soo baxaya hadalo aanaan runtii fileynin oo ah in la bedelo goobtii uu Madaxweynaha ku baaqay, tii hore wuxuu ku baaqay Samareeb, waala wada tagay 1-dii bisha, tan hadda 15-ka February ee uu ku baaqay Madaxweynaha in Garoowe leeskugu taggo oo ah Caasimadda Puntland, magaalo nabadeed, magaalo lagu yaqaano martisoorka, waxaan fileynaa inaanay magaalo kale qaban.” Ayuu yiri Wasiirku.
Wasiir Dubbe ayaa xusay in arrintan ay u arkayaan mid lagu hagardaaminayo geedi-socodka doorashooyinka dalka, xilli sida uu sheegay ay Dowladda Federaalka ka go’an tahay in dalka laga qabto doorasho.
“Waxaan is leenahay runtii inaanay maanta u baahneyn in lugta la jiido, waxaanu u fahmeynaa 6-dii bilood ee soo socotay, sidii lugta loo jiidayay doorashada in illaa hadda loo jiidayo lugta, laakiin Dowladda Federaalka iyo madaxdeeda waxaa ka go’an in shir leeskugu yimaado oo Garoowe leeskugu yimaado 15-ka bishan, si loo fuliyo heshiisyadii 17-kii September, dalkuna uu doorasho u aado.” Ayuu yiri Cismaan Abokar Dubbe, Wasiirka Warfaafinta Somaliya.
Dhanka kale Wasiir Dubbe ayaa soo dhaweeyay baaqii Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ee ahaa in madaxdu markale ka wada fariistaan wadahadalada xalka loogu raadinayo arrimaha doorashooyinka ee dalka.
“Waxaan kaloo aan tixgelineynaa baaqii ka soo baxay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey, oo inagula talinayay in aynu isugu nimaano shirar dambe, si doorashada inoogu bilaabato. Golaha Ammaanka waa hay’adda ugu sareysa dunida ee amniga iyo sharciga.” Ayuu yiri Dubbe.
Ma cadda sababta ay Dowladda Federaalka iyo darafka kale uu midba midka kale u diidan yahay in shirka lagu qabto Garoowe ama Muqdisho, waxaase loo fasirtay mid salka ku haysa arrimo siyaasadeed.
Previous articleCiidanka Xoogga Dalka oo hawlgal ka sameeyay Sh/dhexe (SAWIRRO)
Next articleKhubaro ogaatay halka rasmiga ah ee Coronavirus ka yimid